သိမှတ်ချင်စရာ Grammar အမေးအဖြေများ (အပိုင်း ၂) - Myanmar Network
သိမှတ်ချင်စရာ Grammar အမေးအဖြေများ (အပိုင်း ၂)
Posted by Language Republic on April 9, 2015 at 11:57 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
အင်္ဂလိပ်စာ သဒ္ဒါ ၊ အသုံးအနှုန်းတို့နှင့် ပတ်သက်တဲ့ သင်ကြားရေး စာအုပ်အမြောက်အများကို ရေးသားခဲ့တဲ့ ဆရာကြီး Michael Swan ဆီသို့ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်ရှိ အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာသူများမှ ပေးပို့ မေးမြန်း ထားသော သဒ္ဒါဆိုင်ရာ မေးခွန်းများအပေါ် သူ၏ ဖြေကြားချက်များ တစ်ချို့ကို ကောက်နှုတ် ဖေါ်ပြလိုက်ပါသည်။
စာဖတ်သူတစ်ဦးကတော့ Can I go to the toilet? နဲ့ May I go to the toilet? ဆိုတဲ့ စကားနှစ်ခွန်း ဘာကွာခြားပါသလဲတဲ့။ တိုတိုပြောရရင် နှစ်ခုလုံး အတူတူပါဘဲ။ ဒါပေမဲ့ ခွင့်တောင်းတဲ့ ပုံစံ request for permission နဲ့ ဆိုရင် May နဲ့ ပြောတာက ပိုမိုယဉ်ကျေးပြီး formal ဖြစ်ပေမယ့် common သိပ်မဖြစ်ပါဘူး။ Can ကို သုံးပြီး ခွင့်တောင်းတဲ့ ပုံစံကတော့ နေရာတစ်ကာမှာ တွေ့ရပြီး နှစ်ပေါင်း ၂၀၀ လောက်မက ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သုံးစွဲခဲ့ကြကာ ပုံမှန်လည်း ဖြစ်ပြီး မှန်လည်း မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း ၁၈ ရာစုလောက်က ဘာသာစကားပညာရှင် Samuel Johnson (စတင်ခဲ့တဲ့) old perspective rule ဆိုတဲ့ စကားစည်းကမ်း တစ်ခုကလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီစည်းကမ်းက Can ရဲ့အသုံးကို ရှုံ့ချခဲ့ပြီး ယဉ်ကျေးတဲ့ May နဲ့ သုံးဖို့ လှုံ့ဆော်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့လိုဘဲ ဘာသာစကားအသုံးတွေထဲက လွဲမှားတဲ့ အသုံးတွေကို ဖယ်ရှားပြီး သန့်စင်စေဖို့ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဘာသာစကားအသုံး စည်းကမ်းချက်တွေကို ပုဂ္ဂလိက ခံစားချက်တွေနဲ့ စည်းကမ်းတွေထုတ်ခဲ့တာ တစ်ချို့စည်းကမ်းတွေဆိုရင် ကျွန်တော်တို့တွေ စာသင်ခန်းထဲမှာ သင်ကြားနေကြရတဲ့ ကျောင်းစာအုပ်တွေထဲ အထိပါ ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်လားမသိဘူး ဗြိတ်ိသျှနဲ့ အမေရိကန် ကလေးမျိုးဆက်တွေ တော်တော်များများဟာ Can I go to the toilet? ဆိုတာမှားတယ်၊ မပြောရဘူးလို့ သွန်သင်ခံခဲ့ရလို့ အဲ့ဒီလို အပြောအဆိုတွေမှာ ဇဝေဇဝါဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ အထိကိုပါဘဲ မဟုတ်ပါလား။
Would you mind.. သွယ်ဝိုက် ပမာပေးပြောခြင်းနှင့် Conditional များ
Can နဲ့ May အကြောင်းမေးတဲ့ စာဖတ်သူကဘဲ Would you mind if I open the window? နှင့် Would you mind if I opened the window? တို့ ဘာကွာခြားပါသလဲလို့ မေးပါသေးတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ ဒုတိယစာကြောင်းက ပိုပြီး indirect သွယ်ဝိုက်ကာ ပြောတာဖြစ်လို့ ပိုပြီးယဉ်ကျေးပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ past tense ကို distancing အသုံးခေါ်တဲ့ ပမာပေးပုံနဲ့ ပြောဆိုလို့ပါ။ (ဥပမာ……..လုပ်ခဲ့ရင်၊ ပြောခဲ့ရင်၊ သွားခဲ့ရင် စသည်ဖြင့် တစ်ခုခုကို မလုပ်သေးဘဲ အကယ်၍ လုပ်ခဲ့ရင်ရော ဘယ်လို သဘောရသလဲပေါ့။ ကျွန်တော် တံခါး ဖွင့်ခဲ့မယ်ဆိုရင် အဆင်ပြေမလား။ နားထောင်သူ ဆန္ဒရှိမှ တံခါးပေါက်ဖွင့်မယ်။)
ပထမ စာကြောင်းကလည်း ယဉ်ကျေးတာပါဘဲ။ ဒါပေမဲ့ နည်းနည်းပိုပြီး တိုက်ရိုက် direct ကျတယ်။ (ကျွန်တော် တံခါးဖွင့်လိုက်မယ်နော်။ - နားထောင်သူရဲ့ သဘောထားက ဒုတိယ၊ ပြောသူရဲ့ ဆန္ဒက ပထမ)
အဲ့ဒီ ပထမစာကြောင်းမှာ form တွေရောနေသေးတယ် (would + present tense)။ ဆိုလိုတာက ကျောင်းက ဆရာတွေ တအားကြိုက်တဲ့ conditional သုံးမျိုးထဲမှာ ဘောင်မဝင်ဘူးပေါ့။ (အဲ့ဒါကို mixed structure လို့ ခေါ်ပါတယ်)။
What would you do if your teacher tells you off?
အပေါ်မှာပြထားတဲ့ mixed structure စာကြောင်းလိုမျိုးတွေဟာ စကားပြောတွေမှာ အလွန် common ဖြစ်ပေမဲ့ စာအရေးအသားမှာတော့ ရှောင်ကြပါတယ်။ နောက်တစ်ဆက်တည်း အနေနဲ့ ပြောရရင် If နဲ့ တွဲပြီး ပြောရတဲ့ would အသုံး polite request ကလည်း distancing ရဲ့ နောက်ဥပမာ တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာ - If you would come this way … က If you will come this way … ထက်ပိုပြီး ယဉ်ကျေးကာ၊ စေခိုင်းတဲ့ လေသံကလည်း မထွက်ပါဘူး။ သတိပြုရမှာက ကျွန်တော်တို့တွေ သင်ယူလေ့လာနေတဲ့ first/ second/ third conditional ဖေါ်မြူလာတွေဟာ တစ်ကယ့်လက်တွေ့conditional တွေကို ဖြေရှင်းပေးဖို့ လုံလောက်မှု မရှိဘဲ စာသင်ကြားရာမှာ အထောက်အကူပြုရုံသက်သက်သာ အသုံးဝင်လှပါတယ်ဆိုတာကိုပါ။
Could, may and might
စာဖတ်သူတစ်ဦးက မေးလာပါတယ်။ model verb တွေဖြစ်တဲ့ could၊ may နဲ့ might တုိ့ကို infinitive (base verb) အမျိုးမျိုးနဲ့ တွဲပြီး တစ်ခုနဲ့တစ်ခု အချင်းချင်း လဲလှယ်သုံးစွဲလို့ ရတာကိုသိရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ချို့နေရာတွေမှာတော့ could အစား may နဲ့ might ကိုပဲ သုံးလို့ရသလို၊ အချို့နေရာတွေမှာတော့ may/might အစား could တစ်မျိုးပဲ သုံးလို့ရတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အဲ့ဒီအသုံးကို ရှင်းပြစေချင် ပါတယ်တဲ့။ သူက Could you please clarify their usage? လို့ သူ့စာထဲမှာရေးပါတယ်။
ကဲ…စာဖတ်သူမေးတဲ့ မေးခွန်းကိုဘဲ ဥပမာအနေနဲ့ ပြန်ပြောရတော့မယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ စာဖတ်သူက အဲ့ဒီမေးခွန်းကို “May/might you please clarify their usage?" လို့ ရေးမှာ မဟုတ်ဘူး မဟုတ်လား။ (The reader could not have written “may/ might you please clarify their usage?”) အလားတူဘဲ (အခုကွင်းခတ်ထားတဲ့ စာကြောင်းအစား) ကျွန်တော်ကလည်း “The reader may/ might not have written………..” ဆိုပြီး ရေးလို့ ရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးလေ။ ဒီမှာတင် ဥပမာ ၂ ခုရသွားပြီးပေါ့နော်။
၁။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးလေးနဲ့ တစ်ခုခုစေခိုင်းချင်ရင် request ဆိုတဲ့ တောင်းဆိုချက်ကို question မေးခွန်းပုံစံနဲ့ ပြောလေ့ရှိပါတယ်။ "Please clarify their usage." လို့ ပြောရင် (please ဆိုတဲ့ စကားလုံးပါတာတောင်) command အမိန့်ပေးစေခိုင်းတဲ့ လေသံထွက်ပြီး request ပုံစံမထွက်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီစကားကို can/could you နဲ့ မေးခွန်းပုံစံဖွဲ့ပြီးပြောရင် ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးနဲ့ တောင်းဆိုတဲ့လေသံကိုပြောင်းသွားတာပေါ့။ ဒီမေးခွန်းကို may you တို့ might you တို့နဲ့တော့ ဖွဲ့လို့ မရဘူးနော်။
၂။ Negative structure လို့ခေါ်တဲ့ ဖြစ်နိုင်ခြေ နည်းတယ်၊ ဖြစ်နိုင်ခြေ မရှိဘူးဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ် သက်ရောက်စေချင်လို့ ပြောတဲ့အခါမှာလည်း သူတို့ရဲ့ ခြားနားချက်တွေက်ို အထင်အရှားတွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ something may/might not happen လို့ ဆိုခဲ့ရင် ဖြစ်နိုင်ခြေ သိပ်မရှိဘူး။ (will not possibly happen) လို့ ပြောချင်တာပါ။ အကယ်၍ something can't/ couldn't happen လို့ ဆိုလာရင်တော့ လုံးဝ ဖြစ်နိုင်ခြေ မရှိ/မဖြစ်ဘူးစသည်ဖြင့် ပြောတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ပါ ၂ ခုကိုယှဉ်ကြည့်ကြပါစို့။
I may not learn Chinese this year. (တရုတ်စာသင်ရင် သင်ဖြစ်မယ်။)
လုပ်ဖို့တော့ တော်တော် အားစိုက်ရမယ်။
I couldn't learn Chinese next week. (ကျွန်တော် ရှေ့အပတ်မှာသင်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။)
ဒီအပိုင်းကနည်းနည်းတော့ ရောတတ်တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော modal တွေမှာရှိတတ်တဲ့ အမျိုးမျိုးသောအဓိပ္ပါယ်တွေ၊ မကြာခဏပြောင်းလဲတတ်တဲ့ အသုံးတွေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအထဲကတစ်ခုကတော့ may have.. ရဲ့အသုံးဖြစ်ပါတယ်။ အတိတ်တုန်းက ဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြောရင်သုံးပါတယ်။ အခုလောလော လတ်လတ် အထိကတော့ အများက အောက်ပါအတိုင်း မှတ်သားသုံးစွဲကြပါတယ်။
၃။ အတိတ်တုန်းက ဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိခဲ့ပေမဲ့ မဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင် could have သို့မဟုတ် might have ကိုဘဲသုံးပြီး may have ကိုမသုံးပါဘူး။ ဥပမာ -
If the ambulance hadn’t got to him in time, he could/might have died. (may have လို့ မသုံးပါဘူး)
We could/might easily have lost the match, but Harris scored two brilliant goals in the last ten minutes.
ဒါပေမဲ့ ဖြစ်နိုင်ခြေ တော့ ရှိပါရဲ့ ဒါပေမဲ့ မဖြစ်နိုင်ဘို့က သေခြာတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီ structure သုံးမျိုးစလုံးကိုသုံးပါတယ်။
I’m not sure why she isn’t here. She may/might/could have missed the train.
ဒါပေမဲ့လည်း may have ကို “လုံးဝ မဖြစ်ခဲ့လိုက်ဘူး” ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်နဲ့လည်းသုံးလာပြန်ကြပါတယ်။ ဥပမာ
You were crazy to go solo climbing there – you may have killed yourself.
အခု လောလောဆယ်မှာတော့ ဒီဟာရဲ့ အသုံးနုဲ့ပတ်သက်ပြီး အငြင်းပွားစရာလေးတွေ ဖြစ်နေတုန်းပါဘဲ။ လူငယ်တွေရဲ့ ပါးစပ်ဖျားမှာဒီအသုံးကတော့ common ဖြစ်သလောက် လူကြီးတွေကတော့ ကြိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ပြောင်းလဲနေတဲ့ language မှာဒီအသုံးကို normal pattern ခေါ် ပုံမှန်အသုံးလို့ ပြောလို့ရပါသေးတယ်။ နောင်နှစ် ၃၀ လောက်ဆိုရင်တော့ may have ရဲ့ အသုံးအသစ်က standard ဖြစ်လာမလားမသိနိုင်ဘူးနော်။
အဲ…..ပြီးတော့ ဖြစ်နိုင်ခြေ possibility ထက် လုပ်နိုင်ခြေ ability ကိုပြောချင်ရင်တော့ may/might ကိုမသုံးရပါဘူးနော်။ အဲ့ဒီတော့ကာ ကျွန်တော်က…
Years ago, I could run 100 metres in 11 seconds (မီတာ ၁၀၀ လောက်ကတော့ အသာလေးပြေးနိုင်တယ်။ )
လိုိ့ ပြောမှာဖြစ်ပြီး Years ago, I might run …. (ပြေးမိနိုင်လိမ့်မယ်) လို့ မပြောဘူးနော်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးနည်းနည်းခက်တဲ့ မေးခွန်းကတော့ must နဲ့ have to တို့ရဲ့ ထူးခြားချက်ကိုရှင်းပြပေးပါတဲ့။ အဓိကအားဖြင့် ပြောသူရဲ့ ဆိုလိုရင်း perspective အလိုက် ပြောင်းလဲမှုရှိတတ်တဲ့ ကွဲပြားခြားနားမှုကို စိတ်ဝင်စားလို့ပါဘဲတဲ့။
ဥပမာ You must …, He must …, The doctor says I must …, The doctor says he must …, I say he has to …, I say he must … စတာတွေနဲ့ ပတ်သက်တာတွေပါတဲ့။
ဒီ structure တွေကိုအဓိကအားဖြင့် ၂ မျိုးသုံးပါတယ်။
၁။ သေချာတဲ့ကိစ္စ၊ ယုံကြည်ချက်နဲ့ ကောက်ချက်ဆွဲတာတွေ
Withaname like Llewllyn, he must / has to be Welsh. (ဒီနာမည်နဲ့ ဆိုတော့ ဝေလသားဖြစ်ရမယ်)
When must I / do I have to pay? (ဘယ်တော့ ပေးရမလဲ)
အထက်ပါ ၂ ခုစလုံးမှာ must နဲ့ have to တို့က နည်းနည်းရောထွေးသလိုရှိပါတယ်။ နောက်ပြီး ဘာသာစကား အသုံးပြုပုံတွေရဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့်လည်း သူတို့ရဲ့ အသုံးပြုပုံကို complicate ဖြစ်စေပါတယ်။ လေ့လာသူပညာရှင်တွေအဆိုအရ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀ အတွင်း စစ်တမ်းများအရ ‘must’ က သိသိသာသာ အသုံးနည်းလာပြီး less frequent ဖြစ်လာတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ နောက်ပြီး အမေရိကန် နဲ့ ဗြိတိသျှကွာခြားချက်တွေလည်း ရှိပါတယ်။
အခုမေးသူက မဖြစ်မနေလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ obligation အသုံးနဲ့ ပတ်သက်တာကို ပိုသိချင်တာပါ။ မဖြစ်မနေ လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ သဘောကို ပေါ်လွင်အောင် ပြောတဲ့အခါ ‘must’ နဲ့ ‘have to’ ကို ဘယ်လိုခွဲသုံးရသလဲ ရှင်းပြပါမယ်။
ပြောဆိုသူ speaker သို့မဟုတ်ကြားသူ hearer ကိုယ်တိုင်ဆီကနေ တောင်းဆိုတဲ့ obligation ဆိုရင် ‘must’ ကိုသုံးရပါတယ်။ အခြားသူကသတ်မှတ်ထားတဲ့ စည်းကမ်းချက် သို့မဟုတ် ပြင်ပကလာတဲ့ စေခိုင်းချက်၊ သတ်မှတ်ချက် ဥပဒေ စည်းကမ်းတွေ လိုက်နာရမယ်လို့ ပြောချင်ရင် ‘have to’ ကိုသုံးရပါတယ်။ အောက်ပါဥပမာတွေကိုယှဉ်ကြည့်လိုက်ပါ။
I must clean my shoes: they look terrible.
The firm’s delivery drivers have to clean their vans before they finish work.
You really must driveabit more carefully – you nearly hit that cyclist.
Remember you have to drive on the left in this country.
Must you wear those dirty old jeans all the time?
Do people still have to wear ties in your office?
Tell him he must pay now. (* ပြောသူကသတ်မှတ်ထားတဲ့ စည်းကမ်းချက်ကိုလိုက်နာဖို့ ပြောတာ)
Tell him he has to pay now. (* ချမှတ်ထားတဲ့ စည်းကမ်းအတိုင်းလုပ်ဖို့ တိုက်တွန်းတာ။ personal မဟုတ်ပါ။)
ဒါပေမဲ့လည်း အခုရှင်းပြခဲ့တာတွေဟာ ဖြစ်သင့်တာကို ခွဲခြားရှင်းပြခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပြောသူ၊ နားထောင်သူဆီက ဒါရိုက်လာတဲ့ စေခိုင်းချက်တွေကိုလည်း must အစား have to နဲ့ သုံးထားတဲ့ ဥပမာတွေလည်း တွေ့နိုင်ပါသေးတယ်။ အမေရိကန်တွေကတော့ ‘have to’ ကို ‘must’ ထက် ပိုမို နှစ်သက်စွာ သုံးကြပြီး ဗြိတိန်မှာလည်း တဖြည်းဖြည်း have to က ပိုပိုပြီး common ဖြစ်လို့ လာနေပါပြီ။